▷ Maninona no mahasosotra Fortnite
Ny lalao iray izay efa an-tsena nandritra ny taona maro dia tokony hohatsaraina tanteraka ary tokony hanana fotoana ahafahan'ny olona milalao ny olona nefa tsy manana olana amin'ny lalao.
Ny marina dia somary mifanipaka ireo rehetra ireo noho ny zava-misy fa imbetsaka nisy zavatra nitranga ka niafara tamin'ny fisian'izany Fortnite na izany na tsy izany, ho an'ny goavana indostrialy dia mbola lavitra ny lalana tokony halehany.
Nahatonga olona maromaro hanao fitarainana imasom-bahoaka, toa ny TfueNa, mitaraina momba ny làlana nalain'ny lalao nandritra ny vanim-potoana izy ireo.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity lohahevitra ity ianao dia mitondra fampahalalana bebe kokoa izahay hahafahanao mamaky izany ary mamorona ny hevitrao mifototra amin'ny lafiny samihafa izay manombatombana.
Inona no antony mampinono an'i Fortnite?
Ny antony mahatonga ny olona maro Fortnite Lalao izay nampidina ny kalitaony betsaka ary ho an'ny mpilalao maimbo Izany dia vokatry ny zava-misy fa nandritra ny taona maro ny fanatsarana dia tsy tontosa tanteraka.
Ny lalao dia manohy manolotra bug tena tsotra izay azo vahana nefa mbola misy fiatraikany amin'ny mpilalao. Na mikatona ny mpilalao na tsy mavesatra ny sarintany, Fortnite mbola manana ny olany izy
Raha lalao vaovao io dia tsy ho henjana loatra amin'izy ireo ny fitsikerana. Na izany aza, efa elaela no teny an-tsena dia manomboka maminavina ilay lalao maimbo.
Fortnite Mbola manam-potoana hanatsarana izany ianao satria manana olona marobe mbola milalao ny lalao, saingy mety ho fotoana kely vao hitanao ny fihenan'ny olona mavitrika amin'ny lalao.